USB အကြောင်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home IT Knowledge Tech News USB အကြောင်း
Maung Pauk at 12:21:00 AM IT Knowledge, Tech News,
ဒီခေတ် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ USB နဲ့ပတ်သက်လို့ အမြဲတန်းထိတွေ့နေရတယ်ဆိုတာ သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်.. ဖုန်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ၊ ကွန်ပျူတာ တွေကအစ တီဗွီ၊ရေဒီယိုတွေအဆုံး USB ပေါက်တွေ၊ USB ကြိုးတွေနဲ့ တပ်ဆင်အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ.. အဲဒီတော့ USB အကြောင်း နည်းနည်း သိထားတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ.. ကျွန်တော် ဖတ်မိ၊လေ့လာမိသလောက်လေး မျှဝေပါမယ်.
USB ဆိုတာ Universal Serial Bus ရဲ့အတိုကောက် စာလုံးဖြစ်ပါတယ်.. ဘက်စုံသုံး ဆက်သွယ်ရေးကြိုးပြား လို့ ဘာသာပြန်ရင် ဆီလျော်မလားမသိဘူး.. USB ကို Intel နဲ့ USB-IF (USB Implementers Forum, Inc) ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Ajay Bhatt က ၁၉၉၄ မှာတီထွင်ခဲ့ပါတယ်.. USB-IF (USB Implementers Forum, Inc) ဆိုတာ ထိပ်တန်းကွန်ပျူတာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Intel, Microsoft, Compaq, LSI, Apple နဲ့ HP (Hewlett-Packard) တို့ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ..
နည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းဆိုတဲ့ Bhatt ရဲ့ စိတ်ကူးက တကယ်ကိုကောင်းပေမယ့် နာမည်ကြီး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Apple နဲ့ Microsoft တို့ကို တင်ပြချိန်က သိပ်စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူ.. Intel ကုမ္ပဏီကသာ Bhatt ရဲ့စိတ်ကူးကို လက်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.. USB ကို ၁၉၉၄ မှာစတင်တီထွင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တန်း 1.0 စထုတ်နိုင်တာကတော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ Intel ကုမ္ပဏီက USB နည်းပညာကို ထောက်ပံ့တဲ့ Chips တွေ စတင်ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့် သုံးစွဲသူလက်ထဲကို ပထမဆုံးအရောက်ပို့ပေးခဲ့တာကတော့ Apple ကုမ္ပဏီကဖြစ်ပါတယ်.. Apple က ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထုတ် iMac G3 ကွန်ပျူတာတွေမှာ USB နည်းပညာကို စတင်ထည့်သွင်းပေးခဲ့သလို Microsoft ကုမ္ပဏီကလည်း Window 98 Second Edition တွေကစပြီး ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်.. USB နည်းပညာ မတီထွင်နိုင်ခင်တုန်းက ကွန်ပျူတာတွေမှာ အချက်အလက်တွေ ကူးပြောင်းဖို့အတွက် Port အမျိုးမျိုး၊ Device အမျိုးမျိုးနဲ့ တပ်ဆင်ပြီး အချက်အလက် ကူးပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်.. ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီ တစ်မျိုးကို Port တစ်မျိုး၊ Device တစ်မျိုးနဲ့ Brand အမျိုးမျိုးကြားမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ စနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကွဲပြားလှပါတယ်.. USB ကိုတီထွင်ပြီးတဲ့နောက် ကွန်ပျူတာတွေမှာ USB Port တွေတပ်ဆင်လာပြီး USB နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Device တွေလည်း တီထွင်အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ကြလို့ ကွန်ပျူတာ Brand အမျိုးမျိုးကြား အချက်အလက် ကူးပြောင်းဖို့အတွက် Port အမျိုးမျိုး၊ Device ပုံစံအမျိုးမျိုး မလိုအပ်တော့ဘဲ ဘက်စုံသုံး USB ကိုသာ Standard တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်..
USB အမျိုးအစား (USB Types)၊ မျိုးဆက် (Generation) နဲ့ မြန်နှုန်း ( Speed )
ခုလက်ရှိဒီစာကိုရေးနေချိန်ထိ USB Type ဟာ Type C ထိထွက်ရှိနေပါတယ်.. ဒါဆိုရင် Type က Type A, Type B နဲ့ Type C ဆိုပြီး Type သုံးမျိုးပေါ့..
Generation အနေနဲ့ USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 ဆိုပြီး (6) မျိုးထွက်နေပါပြီ.. Type နဲ့ Generation ကို ယှဉ်တွဲပြရရင် Type A မှာ USB 1.0, 1.1, Type B မှာ USB 2.0 နဲ့ 3.0 ဖြစ်ပြီး Type C မှာတော့ USB 3.1,3.2 ဖြစ်ပါတယ်..
အချက်အလက် ကူးပြောင်းနိုင်စွမ်း ( Data Transfer Speed ) နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်
USB 1.0 က 1.5 Mbit/s ( Megabit per second )
USB 1.1 က 12 Mbit/s
USB 2.0 က 480 Mbit/s
USB 3.0 က5Gbit/s (Gigabit per second)
USB 3.1 က 10 Gbit/s
USB 3.2 က 20 Gbit/s ဖြစ်ပါတယ်..
ခုနောက်ပိုင်း USB Tpye C (3.1, 3.2 Generation) တွေဟာ ကွန်ပျူတာမှာရော၊ ဖုန်း၊ တက်ပလက် စတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြပါပြီ…
အရွယ်အစားတွေကတော့ Standard, Mini နဲ့ Micro ဆိုပြီး ထွက်ပါတယ်..
တစ်မျိုးချင်းစီမှာ ပုံစံ A,B ဆိုပြီးတွဲထွက်ပါတယ်.. စာနဲ့ မပြောတော့ပါဘူး.. ပုံမှာသာ ကြည့်ကြပါတော့..
USB နဲ့ပတ်သက်လို့ သာမန် အခြေခံဒီလောက်သာ သိထားတာမို့ အခြား ဖြည့်စွက်စရာရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်နိုင်ပါကြောင်း…
ဒီခတျေ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ USB နဲ့ပတျသကျလို့ အမွဲတနျးထိတှနေ့ရေတယျဆိုတာ သတိထားမိမယျထငျပါတယျ.. ဖုနျး၊ ဒဈဂဈြတယျကငျမရာ၊ ကှနျပြူတာ တှကေအစ တီဗှီ၊ရဒေီယိုတှအေဆုံး USB ပေါကျတှေ၊ USB ကွိုးတှနေဲ့ တပျဆငျအသုံးပွုနကွေတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ.. အဲဒီတော့ USB အကွောငျး နညျးနညျး သိထားတော့ ပိုမကောငျးဘူးလားဗြာ.. ကြှနျတျော ဖတျမိ၊လလေ့ာမိသလောကျလေး မြှဝပေါမယျ.
USB ဆိုတာ Universal Serial Bus ရဲ့အတိုကောကျ စာလုံးဖွဈပါတယျ.. ဘကျစုံသုံး ဆကျသှယျရေးကွိုးပွား လို့ ဘာသာပွနျရငျ ဆီလြျောမလားမသိဘူး.. USB ကို Intel နဲ့ USB-IF (USB Implementers Forum, Inc) ကိုပူးတှဲတညျထောငျသူ Ajay Bhatt က ၁၉၉၄ မှာတီထှငျခဲ့ပါတယျ.. USB-IF (USB Implementers Forum, Inc) ဆိုတာ ထိပျတနျးကှနျပြူတာနညျးပညာကုမ်ပဏီတှဖွေဈတဲ့ Intel, Microsoft, Compaq, LSI, Apple နဲ့ HP (Hewlett-Packard) တို့ရဲ့ ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျတှေ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုပါ.. နညျးပညာသုံးပစ်စညျးတှေ တဈခုနဲ့တဈခု ခြိတျဆကျဖို့ တဈခုတညျးသောပစ်စညျးဆိုတဲ့ Bhatt ရဲ့ စိတျကူးက တကယျကိုကောငျးပမေယျ့ နာမညျကွီး နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတှဖွေဈတဲ့ Apple နဲ့ Microsoft တို့ကို တငျပွခြိနျက သိပျစိတျမဝငျစားခဲ့ပါဘူ.. Intel ကုမ်ပဏီကသာ Bhatt ရဲ့စိတျကူးကို လကျခံပွီး အကောငျအထညျဖျောဖို့ ရငျးနှီးမွုပျနှံပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ.. USB ကို ၁၉၉၄ မှာစတငျတီထှငျခဲ့ပမေယျ့ တကယျတနျး 1.0 စထုတျနိုငျတာကတော့ ၁၉၉၆ ခုနှဈဖွဈပါတယျ.. ဒီလိုနဲ့ Intel ကုမ်ပဏီက USB နညျးပညာကို ထောကျပံ့တဲ့ Chips တှေ စတငျဖနျတီးခဲ့ပမေယျ့ သုံးစှဲသူလကျထဲကို ပထမဆုံးအရောကျပို့ပေးခဲ့တာကတော့ Apple ကုမ်ပဏီကဖွဈပါတယျ.. Apple က ၁၉၉၈ ခုနှဈထုတျ iMac G3 ကှနျပြူတာတှမှော USB နညျးပညာကို စတငျထညျ့သှငျးပေးခဲ့သလို Microsoft ကုမ်ပဏီကလညျး Window 98 Second Edition တှကေစပွီး ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ.. USB နညျးပညာ မတီထှငျနိုငျခငျတုနျးက ကှနျပြူတာတှမှော အခကျြအလကျတှေ ကူးပွောငျးဖို့အတှကျ Port အမြိုးမြိုး၊ Device အမြိုးမြိုးနဲ့ တပျဆငျပွီး အခကျြအလကျ ကူးပွောငျးခဲ့ကွပါတယျ.. ကှနျပြူတာကုမ်ပဏီ တဈမြိုးကို Port တဈမြိုး၊ Device တဈမြိုးနဲ့ Brand အမြိုးမြိုးကွားမှာ ပုံစံအမြိုးမြိုး၊ စနဈအမြိုးမြိုးနဲ့ ကှဲပွားလှပါတယျ.. USB ကိုတီထှငျပွီးတဲ့နောကျ ကှနျပြူတာတှမှော USB Port တှတေပျဆငျလာပွီး USB နဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျတဲ့ Device တှလေညျး တီထှငျအသုံးပွုလာနိုငျခဲ့ကွလို့ ကှနျပြူတာ Brand အမြိုးမြိုးကွား အခကျြအလကျ ကူးပွောငျးဖို့အတှကျ Port အမြိုးမြိုး၊ Device ပုံစံအမြိုးမြိုး မလိုအပျတော့ဘဲ ဘကျစုံသုံး USB ကိုသာ Standard တဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုလာနိုငျခဲ့ကွပါတယျ..
USB အမြိုးအစား (USB Types)၊ မြိုးဆကျ (Generation) နဲ့ မွနျနှုနျး ( Speed )
ခုလကျရှိဒီစာကိုရေးနခြေိနျထိ USB Type ဟာ Type C ထိထှကျရှိနပေါတယျ.. ဒါဆိုရငျ Type က Type A, Type B နဲ့ Type C ဆိုပွီး Type သုံးမြိုးပေါ့..
Generation အနနေဲ့ USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 ဆိုပွီး (6) မြိုးထှကျနပေါပွီ.. Type နဲ့ Generation ကို ယှဉျတှဲပွရရငျ Type A မှာ USB 1.0, 1.1, Type B မှာ USB 2.0 နဲ့ 3.0 ဖွဈပွီး Type C မှာတော့ USB 3.1,3.2 ဖွဈပါတယျ..
အခကျြအလကျ ကူးပွောငျးနိုငျစှမျး ( Data Transfer Speed ) နဲ့တှကျမယျဆိုရငျ
USB 3.2 က 20 Gbit/s ဖွဈပါတယျ..
ခုနောကျပိုငျး USB Tpye C (3.1, 3.2 Generation) တှဟော ကှနျပြူတာမှာရော၊ ဖုနျး၊ တကျပလကျ စတဲ့ ပစ်စညျးတှမှောပါ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုလာကွပါပွီ…
အရှယျအစားတှကေတော့ Standard, Mini နဲ့ Micro ဆိုပွီး ထှကျပါတယျ..
တဈမြိုးခငျြးစီမှာ ပုံစံ A,B ဆိုပွီးတှဲထှကျပါတယျ.. စာနဲ့ မပွောတော့ပါဘူး.. ပုံမှာသာ ကွညျ့ကွပါတော့..
USB နဲ့ပတျသကျလို့ သာမနျ အခွခေံဒီလောကျသာ သိထားတာမို့ အခွား ဖွညျ့စှကျစရာရှိရငျလညျး ဖွညျ့စှကျနိုငျပါကွောငျး…
IT Knowledge, Tech News
IT Knowledge Tech News